MYANMAR BURMA :NAY MYO ZIN PEACE DAY VIDEO | democracy for burma
MYANMAR BURMA :NAY MYO ZIN PEACE DAY VIDEO
tags: Burma, demonstration, MSDN, Myanmar, Nay Myo Zin, peace day
ငြိမ်းချမ်းရေး အခမ်းအနား သို့ တက်ရောက်လာသောပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများ နှင့် ရင်းနှီးစွာ တွေ့ဆုံပြီး ယခုလို ပြည်သူနှင့် တသားတည်းဖြစ်လာသောအခြေအနေကို လွန်စွာ ၀မ်းမြောက် ကြိုဆိုပါကြောင်း ။ ပြည်သူ အများက ပြင်းပြစွာ လိုလားနေသည့် ငြိမ်းချမ်းရေး နှင့် နိုင်ငံရေး ယဉ်ကျေးမှု စာမျက်နှာသစ်များကို ဖွင့်လှစ်ပေးပါရန် ပန်ကြားခဲ့ပါသည်။
NAY MYO ZIN AND HIS COMRADE
← Big foreigner bosses of all the INGOs based in Burma should take their wages the same as their Burmese colleagues. INGO များတွင် လုပ်ကိုင်နေသော နိုင်ငံခြားသား အရာရှိများသည် မြန်မာအရာရှိများ ရရှိသော နှုန်းထားအတုိုင်းသာ လစာယူသင့်ကြသည်။
Myanmar Burma army official admits interrogation of Rev. Ram Mai →